अर्थनीति « GDP Nepal
काठमाडौं । नेपाल चामल, तेल तथा दाल उद्योग संघले उधारोसम्बन्धी कानुनको अभावका कारण समस्या भएको भन्दै यसको नियमन गर्नुपर्ने जनाएको छ । संघले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेको भन्दै उद्योगले थोक खुद्रा
एमसीसीमा झन अन्योल, सत्तारुढ दलकै कारण अमेरिकी अनुदान फिर्ता जाने जोखिम !
काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले अन्ततः यथास्थितिमा एमसीसी पारित नगर्ने प्रष्ट भएको छ । पार्टीका पूर्वअध्यक्ष झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा गठित तीन सदस्यीय कार्यदलले दिएको सुझावअनुसार संशोधनपछि मात्र संसदमा
मातृका यादवको निर्णय लेखराज भट्टले उल्ट्याए, सिमेन्टको परिमार्जित गुणस्तर खारेज
काठमाडौं । तत्कालीन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृकाप्रसाद यादवको एक विवादास्पद निर्णय बहालवाला मन्त्री लेखराज भट्टले उल्ट्याएका छन् । मन्त्री भट्टले सिमेन्टको परिमार्जित गुणस्तर मापदण्ड खारेज गर्ने निर्णय गरेका
अर्थमन्त्रीको प्रश्नः ६ महिनामा ३० अर्ब एफडीआई आउँदा अर्थतन्त्र कसरी बिग्रिएको हुन्छ ?
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मुलुकको अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै गएको आरोप लगाउनेहरुलाई विराटनगरबाट जवाफ दिएका छन् । चालू आर्थिक वर्षको छ महिना अवधिमा ३० अर्बबराबरको विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता आएको
कोरोनाले नेपाली अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पार्ला ? नेपालले के गर्नुपर्छ ?
काठमाडौं । चीनमा नोबल कोरोना भाइरसका कारण करिब १ हजारको मृत्यु र ४७ हजार संक्रमित भएको अनुमान छ । यसले विश्व अर्थतन्त्रको मियो चीनमात्र नभइ विश्वभर असर पार्ने देखिन्छ ।
बजेटको आकार र राजस्व लक्ष्य घटाएर आर्थिक वृद्धिको समान लक्ष्य कसरी पूरा हुन्छ ?
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा समकालिन अर्थशास्त्रीहरुमध्ये काबिल मानिन्छन् । राज्यका विभिन्न ओहोदामा लामो समयदेखि बसिसकेकाले अध्ययन, अनुभव र क्षमता सवैका आधारमा उनी परिपक्व पनि मानिन्छन् । तर, उनको
१० प्रतिशत क्यासब्याकले भ्याट छली रोकिएला ?
काठमाडौं । नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागू भएको २२ वर्षभन्दा बढी भइसके पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सरकारले वार्षिक ५० लाखसम्म कारोबार गर्नेलाई भ्याटमा दर्ता हुनु
यी हुन् सीआईपी सम्मान पाउने २५ व्यवसायी, यस्तो सुविधा पनि पाउँदैछन्
काठमाडौं । सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्रमा वाणिज्य क्षेत्रको तर्फबाट योगदान बढाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेका विभिन्न १३ विधाका २५ व्यवसायी ‘महत्वपूर्ण व्यावसायिक व्यक्ति’ (सीआईपी) बाट सम्मानित गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य
५ करोडको थ्रेसहोल्डले उद्योग दर्ता घट्यो तर एफडीआई बढ्यो !
काठमाडौं । सरकारले वैदेशिक लगानीमा न्यूनतम ५ करोडमो सीमा तोकेसँगै साना लगानी प्रभावित बनेको छ । यद्यपि, कुल लगानी प्रतिबद्धता भने बढेको देखिन्छ । चालू आर्थिक वर्षको माघ दोस्रो सातासम्म
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर भएर कुशल नेतृत्व प्रदान गरिसकेको अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा आफैं यो संस्थालाई अस्थिर बनाउने गरी प्रस्तुत भइरहेका छन् । खतिवडा आफैं राष्ट्र बैंकका पूर्वकर्मचारी